चलचित्र नहेर्ने दर्शकलाईनै तार्केट गरिएको हो - प्रसन्न पौडेल | ArtistSansar.com
चलचित्र नहेर्ने दर्शकलाईनै तार्केट गरिएको हो – प्रसन्न पौडेल
प्रसन्न पौडेल । म्यूजिक भिडियोमा कहलिएको नाम । पुना फिल्म इन्स्चियुटका बिद्यार्थी समेत रहेका प्रसन्न रङ्गमन्च हुँदै म्यूजिक भिडियो प्रबेश गरेका हुन् । नाटकको विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं.२०१९ सालमा बिराटनगरमा स्थापना गरिएको भानुमोरङ साँस्कृतिक समिति (हाल भानु कला केन्द्र) का संस्थापक तथा रक् एण्ड रोल नृत्यकार तथा नाट्यकलाकर्मी स्व.चतुर्भुज आशावादीको सुपुत्र रहेका प्रसन्नले २०० भन्दा बढी भिडियोको सफल निर्देशन गरिसकेका छन् ।
भिडियोमा पनि रङ्गमन्चीय प्रभाव देखाउने निर्देशक प्रसन्न पौडेल आफ्नो पहिलो प्रोजेक्ट ‘स्वर’को देश दौडाहापक्ष्यात चलचित्रको कलर कलेक्सनमा ब्यस्त रहेका छन् । यहि माघ १४ गते ५५ ओटा हलहरूबाट देशब्यापी रुपमा प्रदशन हुनलागेको चलचित्रलाई अन्य चलचित्र भन्दा पृथक ढंगबाट प्रचारप्रसार गरिएको थियो। प्रस्तुत छ- ‘स्वर’ चलचित्रको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आर्टिस्टनेपाल डटकमका नब ढुंगेलले गरेको कुराकानी:-
# ‘स्वर’ कस्तो चलचित्र हो ?
– चलचित्र नहेर्ने दर्शकलाई तार्केट गरिएर बनाइएको एक सांगीतिक चलचित्र हो । सम्भबत: नेपालको पहिलो सांगीतिक चलचित्रको रुपमा लिएका छौं। जसमा जेनेरेसन ग्यापका कुराहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छ । जसलाई जुन बिषयमा रूचि हुन्छ, त्यहिअनुसारको काम गरेमा सफल भईन्छ र छिटो प्रगती गर्न खोज्न हुन्न। संर्घष गर्न सकेमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
# अन्य चलचित्र र ‘स्वर चलचित्र ‘मा के फरक महसुश पाउँछन् दर्शकले?
– अन्य चलचित्र भन्दा दुइटा कुरामा फरक पाउँछन् दर्शकले । एक त कथामा र अर्को एक्सनमा । धेरै चलचित्रका ‘स्क्रिप्ट’मा कमजोर हुन्छन् । हामीले त्यसमा ध्यान पुर्याएका छौं । प्राय: नेपाली चलचित्रमा कलाकार निर्माताले छान्ने गर्दछन् । तर यसमा निर्देशककै निर्देशन अनुसार काम गरिएको छ। साथै चलचित्रमा जुन पक्षलाई याद गरिएको हुन्न ,त्यों पक्षलाई पस्किएको छ ।
# पछिल्लो समयमा धेरै आश गरिएका चलचित्रहरुले सोचेजस्तो सफलता प्राप्त गरेका छैनन् । कत्तिको आशाबादि हुनुहुन्छ, स्वरबाट ?
– यसमा पनि दुईओटा कुराहरु छन् । एक त चलचित्र आफैं कमजोर भएर । अर्को दर्शकको एक्स्पेक्ट हाई भएर । हाम्रोमा थोरै राम्रा चलचित्र बन्दछन् । र राम्रा चलचित्रलाई दर्शकले हलिवड र बलिवडका चलचित्रको जस्तो ठुलो आशा राख्दछन् । जसलेगर्दा केहि राम्रा चलचित्रपनि नचल्न सक्छन्। त्यसैले नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शकलाई आधार गरिएरनै निर्माण गरिएको छ ।
# चलचित्रको प्रचार कलेज कलेज र देश दौडाहाबाट गर्नुभयो नि ?
– एक त चलचित्र नहेर्ने दर्शकलाईनै तार्केट गरिएको हो । अर्को कुरा प्राय: कलेज पढ्ने बिद्यार्थीहरु नेपाली चलचित्र भन्दा पनि बिदेशी चलचित्र बढी हेर्छन्। नेपाली चलचित्रमा ३ थरि दर्शक छन् । पहिलो रेगुलर दर्शक । जसले नियमित नेपाली चलचित्र हेर्दछन् । र प्राय: सबै चलचित्रलाई राम्रोको सङ्या दिन्छन् । दोश्रो चुजि दर्शक् छन्। जसले नेपाली सिनेमा हरु छानेर मात्र हेर्ने गर्दछन् । तेश्रो नेपाली सिनेमा हेर्दै नहेर्ने छन् । जसले कोठामा बसेर बिदेशी चलचित्र हेर्दछन् र त्यस्तो नेपाली चलचित्रपनि हेर्छन् भन्ने कमेन्ट गर्दछन् ।
त्यसैले हाम्रो प्रचारको निशाना कलेजलाई बनायौ । र उनिहरुको अन्ताक्रियाबाट उनिहरु साच्चैनै नेपाली सिनेमा राम्रो बन्न लागेको महसुश गरेका छन् । साथै हामीले उनीहरुलाई यो पनि अनुरोध गयौ-एक पटक नेपाली चलचित्र हेरेर राम्रो लाई समर्थन र नराम्रोलाई बहिस्कार।
# प्राय: सबै नयाँ कलाकार लिनुको कारणके हो ?
– हरेक फिल्ममा, र जुनसुकै रोलमा पनि एउटै अनुहार दोहरिरहन्छ्न् । यस चलचित्रको कथामा पुरानो कलाकारको नभै नयाँ अनुहारको आबश्यक थियो । र दर्शकलाई फ्रेसनेशको लागि पनि । म यो प्रुफ गर्नपनि चाहन्छु । भनिन्छ – पुरानो कलाकार प्रोफेसनल हुन्छन् । र पुरानो कलाकार राख्यो भने चलचित्र चल्छ । त्यसैले ‘स्वर’ मा प्रस्तुत भएका नयाँ कलाकार पुराना भन्दापनि ज्यदा प्रोफेसनल छन् ।
# चलचित्रको रिजील कस्तो ढंगबाट गर्दै हुनुहुन्छ ?
– देखावटी गर्दिन । र रेड कार्पेटपनि हुँदैन । त्यो दिन प्राय: चलचित्र गजतका कलाकार, समिक्षक, र पत्रकार मात्र उपस्थित हुनेछन् । नेपालमा प्रदशन पछि चलचित्रलाई अस्ट्रेलिया, युके, युएस, दुबई लगायतका देशहरुमा पनि प्रदशन गरिने छ ।
‘I Am Sorry’ Aryan Sigdel
मैले गाली पनि पाउँछु र ताली पनि पाउँछु – मनोज पण्डित